कति छ ‘के,जी,एफ’ सुपरस्टार यशको स,म्पत्ति ? – " सुलभ खबर "
कति छ ‘के,जी,एफ’ सुपरस्टार यशको स,म्पत्ति ?
यो पनि के कमाल गर्न सक्लान् ‘बा,,गी ३’ र ‘सूर्यवंशी’ले ?
एजेन्सी । गत वर्ष अर्थात २०१९ बलिउडको लागि जति सानदार हुन पुग्यो तर यो वर्ष त्यस गतिमा कायम राख्न बलिउडले सकेको छैन । दुई महिना बितिसकेको छ भने बलिउडका लागि अजय देवगनको ‘तानाजी’ले मात्र सफलता चखाएको छ ।
तानाजी बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर भयो, तर अन्य फिल्महरु फ्लप भएका छन् । जसमा स्ट्रीट डान्सर ३डी, छपाक, मलंग, लव आज कल जस्ता प्रतिक्षित एवं मल्टीस्टारर फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल गर्न सकेनन् ।
अब बलिउडको नजर मार्च महिनामा परेको छ । मार्चमा थुप्रै फिल्महरु रिलिज हुँदैछन् तर त्यसमध्ये २ फिल्म यस्ता रहेका छन् जसले बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाउने आँकलन गरिएको छ ।
मा,र्च ६ मा टा,इ,गर श्र,फ र श्रद्धा कपुर अभिनित फिल्म ‘बागी ३’ रिलिज हुँदैछ । फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ भने ट्रेलर अनुसार फिल्म एक्शनले भरिपूर्ण रहने पक्का छ । यसमा कुनै दुईमत छैन कि फिल्मले बम्पर ओपनिङ गर्नेछ ।
यस फिल्मले बक्स अफिसमा थुप्रै रेकर्ड राख्न सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ । यता मार्च २४ मा बलिउडका बक्स अफिसका राजा मानिने अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘सूर्यवंशी’ रिलिज हुँदैछ । हिट फिल्म निर्माण गर्ने रोहित शेट्टीले निर्देशन गरेको यस फिल्मले बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाउने अड्कल काटिएको छ ।
लामो समयपछि अक्षय कुमार मसाला फिल्ममा देखा परेको हुनाले उनका फ्यानहरु उनलाई यस फिल्ममा देख्नका लागि आतुर छन् । यस्तो अवस्थामा यी दुई फिल्मले बक्स अफिसमा ५०० सय करोडको कमाई गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसका अलावा मार्च १३ मा इरफान खान अभिनित फिल्म ‘अंग्रेजी मिडियम’ रिलिज हुँदैछ । २०१७ को सुपरहिट फिल्म ‘हिन्दी मिडियम’सँग मेल खाने यस फिल्मले पनि बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसकारण मार्च महिनामा बलिउडले राम्रो कलेक्शन गर्ने बताइएको छ ।